Bafuna kufakwe nezifundo ngamakhambi esintu konesi
USOLWAZI Nceba Gqaleni ongumcwaningi ngamakhambi esintu, ngokusebenzisana nesikhungo iMedical School Africa Health Research Institute
Themba Ntshingila | June 24, 2018
BAFUNA kufakwe izifundo ngamakhambi esintu ezifundweni ezenziwa wonesi nodokotela kuleli.
Lesi siphakamiso siqhamuke ezifundisweni zaseNyuvesi yaKwaZulu-Natal ezisebenzisana nabelaphi bendabuko nabathaka izimbiza, embuthanweni obuseMoses Mbabhida People’s Park eThekwini ngoLwesihlanu.
USolwazi Nceba Gqaleni, owenza ucwaningo ngokusebenza kwamakhambi esintu esebenzisana nesikhungo iMedical School Africa Health Research Institute esise-University of KwaZulu-Natal eThekwini, uthe ukufakwa kohlelo lokufunda ngamakhambi esintu kwabafundela ubudokotela nobuhlengikazi, kuzobafundisa ukuthi zombili izindlela zokwelapha, okungeyendabuko neyasentshonalanga, zibalulekile.
“Okwamanje okugqamayo wukuthi uhlelo lwemfundo lusalandela kakhulu indlela yokwelapha yasentshonalanga.”
Uthe okubalulekile wukufundisa nabelaphi izindlela zokonga imithi yemvelo, esetshenziselwa ukwenza amakhambi okwelapha.
Mayelana nombuthano obekuhlanganwe ngawo, uthe bekuwukuthola izindlela besebenzisana nomasipala waseThekwini, zokuthuthukisa ukwelapha okudidiyele.
“Kumele kusetshenziswane ngale ndlela yokuthi umuntu akwazi ukuthola usizo kubelaphi bendabuko, uma kwenzeka ebhekana nengqinamba ethile emtholampilo noma esibhedlela,” kusho uGqaleni.
Uthe ukusebenzisana kumele kuhambisane nokutholakala kosizo kalula emphakathini, odinga ukwelashwa, kungaze kulindwe ukuthi kuzomele isiguli siye esibhedlela noma emtholampilo, ebe umelaphi wendabuko ekhona.
UMnuz Musawenkosi Cele onguNobhala Jikelele weTraditional Health Practitioners KwaZulu-Natal, uthe ukusebenzisana kuzobafundisa ukuthi asikho isidingo sokuthi uchathe umuntu uma egula ngoba uzomqeda amandla.
“Kumele siphinde sikubuke futhi ngeso lebhizinisi, sizibuze ukuthi ngabe abelaphi bendabuko bayakwazi yini bona ukufaka umnotho ezweni ngabakwenzayo,” usho uCele.
Ukusetshe-nziswa kwezinto ezithinta indabuko, uthe nakho kumele kubhekisiswe. Ngokwakhe, akuwona kuphela amakhambi okumele aqikelelwe, kodwa izimbuzi ezihlatshwayo nezinkukhu uma kwenziwa izinto eziphathelene nemisebenzi yesintu, kumele ziqikelelwe.
Enza isibonelo uthe izimbuzi zamadlozi kumele kubhekwe ukuthi zidliswani, futhi ziwuhlobo luni, kanjalo nezinkukhu ezisetshenziselwa lowo msebenzi.
“Akufanele thina belaphi bomdabu sidume ngokuthi siyizigebengu futhi kuthiwa sibulala abantu abanebala elimhlophe ngoba kuthiwa sisuke sifuna ukwenza imithi ngabo,” usho njalo.
UDkt Thonjani Hlongwane ongusihlalo weThekwini Traditional Health Practioners, uthe obekwenzeka izolo, wukuvuselela obesekugqitshwe ngabathile.
“Namhlanje sizokwethula ngokusemthethweni ukusebenzisana nohulumeni, ukuze sithole ikhambi eliya phambili ngokusebenzisa u-Act No 22, ka-2007, othi uma kukhona ukusebenzisana ngokusemthweni kwabelaphi basentshonalanga nadendabuko,” kusho uHlongwane.